အွန်လိုင်းဗီဒီယိုချက်တင် - ဗီဒီယိုချက်တင်ပြကစားတဲ့!
ဒီမှာအကောင်းဆုံးညစ်ညမ်းနှင့်အတူစကားပြောနေသောအမျိုးသားများအခု သူတို့ကြိုက်တတ်တဲ့အသွင်လိင်အတွက်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းဗီဒီယိုချက်တင်။ ဒီနေရာတွင်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်အခမဲ့ၡမ်ားညမ်းဗီဒီယိုစကားပြောသည်သာနှင့်အတူချစ်သူ၏လှပသောအမျိုးသား၊အဖြစ်များစွာသောအခြားအခမဲ့ညစ်ညမ်းလိင်ဗီဒီယိုချက်တင်။ အကောင်းဆုံးညစ်ညမ်းဗီဒီယိုများမှတ်ပုံတင်ခြင်းမရှိဘဲ၊လိင်ဗီဒီယိုစကားပြောသင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်အမှန်တကယ်ရင်းနှီးကခုန်ခြင်းနှင့်လိင်တူချစ်သူ။ အခမဲ့ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူယောက်ျားနှင့်ပျော်မွေ့မမေ့နိုင်သောလိင်အွန်လိုင်းဂိမ်းနှင့်လုံးဝအခမဲ့။ ရဲအတန်းနှင့်အရသာလူနှစ်ဦးအလွန်စိတ်လှုပ်ရှားနေကြတယ်ပယ်ပြသရန်မိမိတို့အဝတ်အချည်းစည်းခန္ဓာကိုယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုစကားပြောသင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်နှင့်အလွန်အဆင်းလှသောနှင့်ကြွက်သားကိုယ္စား လိုသူအားကောင်းနှင့်ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့။။။။။ အကောင်းဆုံးယောက်ျားတွေအဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည်လောကသို့ခုန်ချပြီးအဖိုးတန်အလိုဆန္ဒနှင့်။ ထူးခြားတဲ့နှင့်မေတ္တာရှင်အမျိုးသားများ၏ကြီးမားသောစွန့်စား။ ကိုညမ်းဗီဒီယိုစကားပြောခန်း၊သငျသညျတှေ့နိုငျကိုယ်အထူးလူတစ်ဦး၏အိပ်မက်များ၏ဖျော်ဖြေရေးအတွက်တအောင်းနေရာအရပ်နှင့်အတူ။ နှင့်ဒီလိုလုပ်ဖို့၊သင်လိုအပ် သင်လိုအပ်သမျှတစ်ဦးကမ်။ သာကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားပြောခန်း၊သင်တွေ့ကြုံလိင်၊-အထိခိုက်မခံ၊ကျောင်းသား၊လိင်၊အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ကောင်လေးနှင့်အခြားသူများ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုချက်တင်အားလုံးရှာတွေ့နိုင်ပါသည်အမျိုးအစားများညစ်ညမ်းဗီဒီယိုများ။ ၊သင်ကနောင်တမည်မဟုတ်။ သွားရောက်ကြည့်ရှုအားဖြင့်အမျိုးအစားဆှဗီဒီယိုချတ်လူတို့နှင့်အတူ၊သင်လေ့လာသင်ယူကြလိမ့်မည်အကြောင်းကိုမဆိုသင့်ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်။ ပူပြင်းတဲ့အထီး -သူမကြိုးစားမိတ်ဆက်ဖို့ဒီလူအတွက်ပုဂ္ဂလိကနှင့်ဖန်တီးသူမ၏အလိုဆန္ဒနှင့်အတူအကြံအစည်အတွက်သီချင်း။ အခမဲ့နှင့်စျေးနှုန်းသက်သာဂြိုဟ်လိုဝန်ဆောင်မှုသည်စောင့်ဆိုင်းသင်တို့အဘို့အခပ်သိမ်းသောမိနစ်အတွက်ရှေ့ကင်မရာကမှန်ဘီလူး။ ခံစားချိုလေထု၏ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနှင့်ချစ်ကြည်ရေး။ ကြီးကျောင်း၊ကြီးစွာသောအခွက်တဆယ်နှင့်အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်သင်ဆိပ်ကမ်းအတွက်၊ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး၊သာယာသောေဖ်ာ္ေျဖေရး၊ေဖ်ာ္ေျဖေရး၊သန့်၊စသည်တို့ကို။ ဃ။ အရပ်နိုင်သည့်နေရာတစ်ခုရှိသည်စိတ်ဝင်စားဖို့စကားပြောဆို။ သာယာသောအမိတ်ဆက်ဖို့စိတ်ဝင်စားစရာအလုံးစုံကျက်စောင့်ကြိုသတင်းရပ်ကွက်အမျိုးမျိုးအတွက်အရင်းအမြစ်သတင်းအချက်အဆင်သင့်၊အလင်းအလင်း၏တညျးနှင့်အမှန်တကယ်ပြသ၏။ ဒီနေရာမှာအွန်လိုင်းချက်တင်နှင့်အတူသားသမီးအတွက်ညစ်ညမ်းအမျိုးအစား၊အင်တာနက်ပေါ်မှာရှိပါတယ်ထူးခြားသောဂုဏ်စမ်းသပ်ကိုက်ညီကြောင်း။ ပင်အများဆုံးအဗျာနှင့်လူကြိုက်အရသာ၊ဤတစ်ဖြစ်ပါသည်သောသင်တို့၌မွေ့လျော်လိမ့်မည်။ တွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတစ်လောက၏ စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အကြိုင်အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတစ်လောက၏အိပ်မက်များဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်တောအဖြစ်တစ်ဦးစဉ်ဆက်မပြတ်အလိုဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အသင့်ယုံကြည်ခြင်းနှင့်စိတ်ကူးစိတ်သန်း။
ပူးပေါင်းပြီး၊လူအပေါင်းတို့သည်သတင်းနှင့်သင်မှတက်။ အသိပညာအကြီးကျယ်ဆုံးနှင့်တန်ဖိုးအဘို့အခေတ်မီ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာနေကြသည်၊နှင့်တစ်ခါတစ်ရံ၊အပြင်ကနေသွင်ဆက်သွယ်ရေး၊အဘယ်သူမျှမကအခြားအခွင့်အခြားလူတို့အားပြောဆိုရန်၊ဆွေးနွေးအရေအကြောင်းအရာရုံသူတို့ကိုမျှဝေ။ ကစားတဲ့ရဲ့စကားပြောအင်္ဂါရပ်ခွင့်ပြုမှအလုပ်ဖုန်းကိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာ့အရှိနဲ့အလွယ်တကူဖြည့်စွက်အတွက်ကွာဟဆက်သွယ်ရေးအတွက်။ စကားပြောသည့်အခါအဆင်ပြေစေနှင့်လိုအပ်သောဖြစ်ပါသည်။ သိလိုရာကိုဆွဲဆောင်ဖို့ဤမျှလောက်များစွာသောလူတို့တကယ်တော့၊အရာအားလုံးကိုအလွန်ရိုးရှင်းသောနှင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်း:ဖွားဗီဒီယိုချက်တင်ဝဲလူတွေထောင်ပေါင်းများစွာ၏၊ဤအဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်၊ဤစကားပြောဆိုမှုအတွက်အဆင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းနေ့တိုင်းနှင့်လူတိုင်းကိုဒီဆက်သွယ်ရေးအိမ်၊တောက်ပနှင့်ကြွယ်ဝသော၊နှင့်ခြောက်သွေ့နှင့်အရောင်စုံ။ ဆိုက်ကနေအခမဲ့အဘို့အစကားပြောခြင်း၊မိုးရွာကားလမ်းတို့သို့ထွက်လာမယ့်ဝင်းဒိုး၏၊အခါစိတ်နေသရွေ့အလျင်အမြန်ညှိုးဆောင်းဦးရာသီညနေခင်းမည်ဖြစ်တောင်ပိုပြီးတောက်ပ။ ကြောင့်လူသိများသောများ၏လူကြိုက်များကိုအကစားတဲ့-ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူဤအမည်ကို-အင်ဆက်သွယ်ရေး၏နည်းလမ်းများ။ နည်းလမ်းများစွာအတွက်၊အလုပ်၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းကိုအင်တာနက်ချိတ်ဆက်၊နှင့်အပြောင်းအလဲအရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍ။ ဤသည်ဝမ်းမြောက်ခြင်းအဘို့အ ၊ဒါပေမယ့်သူများပြောချင်တဲ့အရုဏ်ရှေ့မှာပြောဆိုလွန်း။ ကလွယ်ကူမယ့်ခံစားရန်ပုဂ္ဂလိကအတွေ့အကြုံ။ ဒါကြောင့်၊စကားပြောကိုစတင်၊သင်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးဖြတ်သန်းသွားမှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွေ၊ကိုယ့်ရဲ့ကြီးမြတ်။ ချက်တင်ကစားတဲ့အဘို့ကိုချက်ချင်းရရှိနိုင်၊အခမဲ့သင်သည်ချက်တင်စကားပြောနိုင်နှင့်အတူနီးပါးအခြားမည်သူမဆို။ သုံးစွဲသူအရေအတွက်ကြီးထွားလာသည်နေ့တိုင်း၊ အခွင့်အလမ်းကိုဖြည့်ဆည်းဖို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးထွားလာနှင့်ရေရှည်ဆက်သွယ်ရေးအသွင်။ လူတိုင်းသိသောခရီးသွားလာအားဖြင့်ရထားအတတ်သည်အလွန်အရေးကြီးသည်၊နှင့်ဤသည်အဘယ်သူမျှမမတော်တဆ:မောင်အမျိုး၏စြပ္က်ယ္၊အဓိဋ္ဌာန်နားထောင်လှုံ့ဆော်၏နိုးထနှင့်အထောက်အကူဖြစ်စေဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက်ခက်ခဲအခြေအနေ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်အရွယ်ကသင့်ကားအပေါ်တစ်ဦးရှည်လျားသောမီးရထားလမ်း၊နှင့်သင့်ဆြးေႏြးအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ဦးလုံးဝအသစ်စံအဆက္သြယ္ျခင္း-ေရုရှားနှင့်ငါတို့လူမျိုး-တ၏အတောက်ပ။ ၏ဂုဏ်အခမဲ့ချက်တင်ကျိန်းသေလူတိုင်းအသုံးပွုနိုငျအားလုံးအဖစ္ပါတယ္။ သင်ခံရဖို့ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးတစ်ဦးအကြီးတန်းအင်တာနက်အသုံးပြုသူကိုကျွမ်းကျင်ဖို့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများလှိမ့်။ ပန္ခ်က္မ်ားအခြားလုပ်ငန်းဆောင်တာများအလွန်အစာရှောင်ခြင်းနှင့်လွယ်ကူသည်။ မရှိအတားအဆီး၊ဆိုလိုတာကလူအတော်များများအတွက်ပါဝင်ထိုကဲ့သို့သောဆက်သွယ်ရေး။ လူ့အဖွဲ့အစည်းခွဲခြားခြင်းအားဖြင့်အတန်းသို့မဟုတ်အတန်းအစားအဖွဲ့ဝင်အရံအထားအတွင်းတင်းကျပ်သောနိမိတ်။ ဟုတ်ကဲ့၊ဗီဒီယိုစကားပြောတတ်ဖို့အခွင့်အလမ်းကိုဖျက်သိမ်းျခံဖြစ်လာသင်ချင်သမျှကို။ သူ ရှက်ခြင်းနှင့်ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊နှင့်အလင်းထွက်သွား၊မစမတ်ဖုန်းနှင့်စမတ်-ငါတို့ရှိသမျှသည်ငမ်းငမ်းဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်ရှာကျွန်ုပ်တို့၏အစေ့။ ယနေ့အချိန်တွင်၊များစွာသောလူရှိပါတယ်ရုရှားမှာအဆင်သင့်နေသောဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်အတွက်အရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့နည်းလမ်းရှာတွေ့အများအပြားအားသာချက်များကိုမိမိတို့အဘို့။ ပရောစကားပြောအခွင့်အလမ်းနှင့်ဖွင့်သင့်အသက်တာကိုပြောင်းလဲနှင့်စတင်နေ့စဉ်စကားပြောနှင့်အတူ၊ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများမှလူများ။ ဗီဒီယိုစကားပြောချိန်းတွေ့လိမ့်မည်အမှန်တကယ်ရှာဖွေတွေ့ရှိ၊သင်မူကားလည်းအားလျော့ဖြစ်လာမှအသစ်တခုကမ္ဘာနှင့်အကျိုးအတွက်သတ္တိချိန်းတွေ့အားဖြင့်ဗီဒီယိုချတ်။ သူနေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာအတွက်အဆက်မပြတ်ဆက်သွယ်ရေး။ သို့သော်မည်သို့မကြာခဏမရှိလုံလောက်တဲ့အချိန်သို့မဟုတ်လူအကြောင်းပြောဆိုရန်နာကျင်မှု။ ယခုဤပြဿနာ၏။ ရန်လုံလောက်သောဖြစ်၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုနိုင်ရုရှားကစားတဲ့ချက်တင်ကနေတဆင့်အင်တာနက်ရှာဖွေဖို့ပြီးပြည့်စုံသောအဖော်ပြီးပြောတယ်။ သစ်ကိုအဖြစ်မှန်ထောင်အင်္ဂါ-အွန်လိုင်းဗီဒီယိုချက်တင်။ တစ်ဦးစကားလက်ဆုံအချိန်မရွေးထိုနေ့၏ဆောင်ခဲ့ကြလိမ့်မည်၊ဝမ်းမြောက်သောစိတ်သူမည်သူမဆိုရှာမရေသး၏ပုံစံအချက်အလက်။ အွန်လိုင်းဗီဒီယိုချက်တင်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ၏ကွဲပြားခြားနားသောအသက်အရွယ်နှင့်လူမှုရေးအဆင့်အတန်းသည် အသစ်အပေါ်သည္။ ဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့အနေနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစရာနှင့်အဆင်ပြေဝန်ဆောင်မှုခွင့်ပြုရှိသည်ဖို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့စကားပြောမထွက်ဘဲသင်၏နေအိမ်၊နှင့်ထိရောက်စွာသုံးစွဲသင့်ရဲ့အခမဲ့အချိန်။ စကားပြောမပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုဖို့စတင်စကားပြောနီးပါးချက်ချင်းအတူကစားတဲ့သတင္း။ သင်ဆုံးဖြတ်ရန်နှင့်သင်၏ဆက်ဆံရေးအသစ်အားဖြင့်ကိုယ်နှင့်အမျှတာဝန်ဝတ္တရားများအ သာအတု။ အဓိကနိယာမ၏ဗီဒီယိုကစားတဲ့အဖို့လျှောက်ရှာဘို့အညာဘက်ကိုလူတစ်ဦးမှပြောဆိုရန်။ အသီးအသီးဗီဒီယိုကစားတဲ့အစည်းအဝေးထူးခြားကွဲပြား။ သင်ဘယ်လိုမသိရပါဘူးကျွန်တော်တို့ကိုအများအပြားထွက်ရနိုင်။ တစ်စုံတစ်ဦးတည်ဆောက်မင်ရင်းနှီးနှင့်ပင်ဆက်ဆံရေးကို။ ကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ဝင်ကမ္ဘာ့အကျယ်ပြန့်၊အရာအားလုံးပြောင်းလဲသွား။ ပြင်ပကနေ၊ကျနော်တို့တွေ့မြင်နိုင်သည်နှင့်အတူတစ်စုံတစ်ယောက်တူညီသောအကျိုးစီးပွားဖြစ်။ အစကားပြောဆိုသာသောသူတို့အဘို့ပြောဆိုရန်ကြိုက်။ ဒါဟာမသနားမမြဲမြင်အဘယ်သို့သောအခြားသူများကိုအမှန်တကယ်ကဲ့သို့သောကြည့်ရှု။ ပြီးနောက်ရှိသမျှ၊အင်တာနက်ပေါ်မှာလူတိုင်းကိုဖန်တီးရန်ကြိုးစားနေပြီးပြည့်စုံသောပုံရိပ်ကို။ သို့သော်မကြံ။ ဗီဒီယိုချက်တင်အွန်လိုင်းသင်ဆက်သွယ်ဖို့ကူညီပေးသည်နှင့်အတူတစ်ဦးကိုမှန်ကန်လူတစ်ဦး ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမဟုတ်၊ပုံရိပ်တစ်ခုနှင့်အတူကလောင်အမည်နှင့်နံပါတ်များ။ အပေါ်ပိုမိုသိရှိအင်တာနက်နှင့်အထူးသဖြင့်ဆက်သွယ်ရေးအတွက်မကြာခဏအထောက်အကူပြုရှုပ်ထွေးသောသူတစ်ဦးကိုလေ့လာစူးစမ်းဖို့မိမိတို့ပြဿနာများ၏ဖယ်ရှားပစ်ရရန်၊ဆက်သွယ်နှင့်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်ဖြစ်စေအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများ၏ကမ္ဘာနှင့်ဖြစ်နိုင်သည်ဘဝ။ ဒါပေမယ့်တချိန်တည်းမှာပင်ပြီးနောက်၊လူတို့နှင့်အတူဆက်သွယ်ခြင်း၊သင်မှတဆင့်သွားနိုင်ပါတယ်၊သင်အဆိပ်ဖြစ်စေ၊မတူညီဗီဒီယိုချက်တင်-သင်ချင်ကြပါဘူးအထိုင်အင်တာနက်ပေါ်မှာ။ ထိုအခါဘယ်လိုခွဲခြားရန်မြင်းမှအကောင်းနှင့်အပြည့်အဝဆြးေႏြးေ. ငါသည်အဘယ်သို့အကြောင်းကိုသင်၏ပြိုင်ဘက်အဖြစ်စကားဝိုင်းမှာဘယ်လိုပြုမူစနစ်တကျအတွက်အွန်လိုင်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး၊ဒီအကြောင်းကြားပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်ဟာဗီဒီယိုစကားပြော.
ကြသည်မဟုတ်သူများအကျွမ်းတဝင်နှင့်အတူအစားရွေးချယ်နိုင်ပါသည်ကွဲပြားခြားနားသောအဖြေကိုဤမေးခွန်း။ လူအများစုကအဲဒီအရုံတစျခုနည်းလမ်းအဖြုန်းဖို့သူတို့ရဲ့အခမဲ့အချိန်၊ဖျော်ဖြေရေး၊ဘာမှထပ်မ။ သို့သော်၊စရှိတယ်တဲ့သူတွေမြင်သာအောင်မြင်မှုများနှင့်အခွင့်အလမ်းများအတွက်ဗီဒီယိုချက်တင်။ သင့်ရဲ့ရှာဖွေရစာန်၊ခ်ဲကုပ်နှင့်ရုတ်တရက်အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှာတွေ့လုံးဝကွဲပြားခြားနားသော။ အခြားအထောင့်။ အဲဒီအားလုံးမဟုတ်ပါ။ သင်သင်ယူပါလိမ့်မယ်အရှိဆုံးလုပ်ဖို့ဘယ်လိုသင်သည်သင်၏ဗီဒီယိုချက်တင်အတွေ့အကြုံ။ သင်ချင်ကြဘူးဆိုရင်စကားပြောတဲ့ရှည်လျားစကားပြော၊တစ်ကမ်ကြီးစွာသောရွေးချယ်မှုသင်တို့အဘို့။ နှင့်အတူဤဝန်ဆောင်မှု၊တစ်ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးဖွင့်လှစ်တက်သူ့အဘို့မရှိတဲ့အချိန်ကန့်သတ်၊သင်သည်ချက်တင်စကားပြောနိုင်မှာအဖြစ်အများကြီးငျလိုခငျြအဖြစ်၊သငျသညျအစဉ်အမြဲပျော်စရာရှိသည်တူညီတဲ့လူ။ သင်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးထင်ပါတယ်ဘယ်လိုအကြောင်းရေးသားဖို့ဤဆောင်းပါးဖြစ်စေ၊အခြားသူများအတွက်စိတ်ဝင်စားကြ-သင်ရုံမှတဆင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုကမ်နှင့်ပျော်မွေ့။ ဘယ်အရာကိုအမည်မသိချိန်းတွေ့ချက်တင်ဆွဲဆောင်မှုအသုံးပြုသူများအတွက်။ ဖွယ်ရှိသည့်အချက်ကိုလူတိုင်းပါဝင်နိုင်ပြီးပြည့်စုံသောမထိုက်မတန်အဘို့။ တချိန်တည်းမှာ၊မခွဲခြားဘဲ၎င်းတို့၏အမှန်တကယ်အခြေအနေပဲဖြစ်ဖြစ်၊မိသားစုဝင်များ၊ဗီဒီယိုချက်တင်၊လူတွေဖြစ်လာညီ၊မယုံနိုင်လောက်အောင်ပွင့်လင်းလွတ်လပ်သော။.
မြန်မာနိုင်ငံ၏ဝန်ဆောင်မှုအဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်စကားပြောဆိုမှုနှင့်သင်ထိတ်လန်ဗီဒီယိုများနှင့်မည္။ ဒီနေရာတွင်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဆင်ပြေတဲ့သဘော၊ချစ်ကြည်ကမ်သောကြောင့်၊ချစ်ခြင်းမေတ္တာသို့မဟုတ်ချစ်ကြည် ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူမိတ်ဆွေတစ်ဦးကိုကျပန်း။ နှင့်အတူအမိန့်တော်ကြောင့်အယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများဘယ်သူမြင်ချင်၊သင်အနည်းငယ်သာရှိသူတို့ကိုအကြား-ကွန်ပျူတာတစ်ခုနှင့်တစ်ခုအကွာအဝေး။ သာ၌အသက်ရှင်သောဗီဒီယိုချက်တင်။ ဒီအကြာကအသစ်၊အဆင့်မြင့်။ စကားဝိုင်းနေရာယူတစ်ယောက်၊အဘယ်သူမျှမနှောင့်ယှက်လိမ့်မည်၊နှောင့်ယှက်သို့မဟုတ်နှောင့်ယှက်။ ပဲသင်၏နှစ်ဦးတို့၊သင်နှင့်သင်။ ဗီဒီယိုအသိအမှတ်ပြုလည်းအများကြီးပိုမိုလွယ်ကူပြီးပိုမိုအဆင်ပြေ၊အထူးသဖြင့်အလွန်ဆုံးအသက်အရွယ်တုန်းကအွန်လိုင်းနှင့်လိုအပ်သည့်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ကိုယ်ပိုင်က်င္ႀ။ ငါတို့သည်ဖန်ဆင်းအများကြီးချစ်စရာနှင့်ဟာသစတစ်ကာများ။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့၊တစ်ခါတစ်ရံတစ်တံဆိပ်အပေါ်ကယ်နှုတ်တော်မူအချိန်ပြောနိုင်ထက်အများကြီးပိုအပိုဒ်၏။ ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်စု၏လူကြိုက်အများဆုံးစိတ်ခံစားမှုများအတွက်အဟောင်းအပြုံး။ ဗီဒီယိုစကားပြောတစ်ဦးချိန်းတွေ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာများအတွက်ပုံမှန်၊ကျောင်းသားကျောင်းလူတွေ၊ယခုမူကား၊၊မသာသောသူတို့အဘို့အရာတစ်ခုခုရှိသည်ဖို့ပြောဖို့အသီးအသီးအခြား။ ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ဒါကြောင့်တန်ဖိုးရှိမပေးဆောင်ငွေကိုခံစားခွင့်အလမ်းအဖြစ်တွေ့ဆုံရန်။ ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုသည်အနည်းငယ် အပိုဆောင်းအင်္ဂါရပ်များပိုမိုသွက်ဆက်သွယ်ရေး။
ကျွန်တော်တို့ဆွဲစတစ်ကာများအားလုံးအခါသမယ။ ကျွန်တော်တစ်ဦးရှိကြောင်များအတွက်ငွေပမာဏရွှင်လန်းမှု၊ဒေါသ၊ပျော်ရွှင်မှုအတွက်၊ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊စိတ်ခံစားမှု။ အဆိုပါစိတ်ခံစားမှုဖော်ပြကြသည်သတ္တိနှင့်အထွက်မတ်တပ်ရပ်။ သင်ဟောပြောဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုအပေါ်ကမ်နှင့်အတူတကျွန်းတနိုင်ငံသားတို့အတွက်ဤစနစ်နဲ့အသုံးပြုသူများအတွက် သင့်မိတ်ဆွေစာရင်း။ သို့သော်ငြားလည်း၊သင်တို့ကိုလက်လွတ်စေခြင်းငှါအနေနဲ့မလိုချင်တဲ့အစကားဝိုင်း၊ဒါကြောင့်ထံမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်ပါနှင့်အတူဆက်သွယ်ခြင်း။ ဒီနေရာမှာကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်အများအပြားအွန်လိုင်းလမ်းညွှန်များအပေါ်မေတ္တာနှင့်ချစ်ကြည်ရေး။ ဗီဒီယိုအစည်းအဝေးကရွေးချယ်သည်၊အချိန်၊နားလည်တဲ့သူတွေအများစုကိုဖြုန်းသူတို့၏ဘဝများ။ ဒါဟာစပ္ထားတဲ့လူတွေအားလုံးအတွက်ကမ္ဘာနှင့်စဉ်းစားသည်အလွယ်ကူဆုံးနှင့်အဆင်ပြေဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုကိုသိကျွမ်းရ။ လူများအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာအတွက်။အပျက်၏လူများအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာအတွက်။ နေ့တိုင်း၊ထက်ပိုပြီးအမျိုးသမီးများ၊သူတို့လွှင့်တိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုစကားပြောခန်း။ သူတို့ပြင်ဆင်နေကြသည်သောဉာဏ်သဘောဆက်သွယ်ရေး။ ပို့စ်သင့်ရဲ့ဓါတ်ပုံတွေအပေါ်အစာကျွေးဖို့အချိန်မှာသင့်ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကို၏။ မဟုတ်ပါဘူးလျှင်စိတ်ဓါတ်များအတွက်စကားပြော၊သင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်သူတို့ရဲ့ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယို။ သူတို့ထဲကတစ်ဦးလုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။ အစားအစာကိုအဆက်မပြတ်ရေးသားတော့မပျင်းရ။
လူကြီးမင်း၊အကျွန်ုပ်တို့သည်ပူဇော်အပြားဗီဒီယိုချက်တင်နိုင်:ချက်တင်နှင့်အတူတကျွန်းတနိုင်ငံသား။ ဒီဆိုက်တွင်သင်တွေ့လိမ့်မည်အလူကြိုက်အများဆုံးဗီဒီယိုချက်တင်ကနေယူကရိန်း၊ရုရှား၊အမေရိကန်၊ပြင်သစ်၊ဂျာမနီနှင့်အခြားနိုင်ငံများ။ ကိုယ့်ရွေးသင်သည်သင်၏အလိုရှိသောဗီဒီယိုစကားပြောခန်းနှင့်ချက်တင်။ စကားဝိုင်းစာရင်းကိုအမြဲရေးသားသစ်နှင့်အတူ။ ဒီနေရာမှာသင်အမြဲအကောင်းတစ်ဦးကိုရှာဖွေဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အရောအတွေ့အကြုံကြောင့်ဒီနေရာတွင်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်အပေါင်းတို့ဗီဒီယိုချက်တင်ကိုသင်အခမဲ့အသုံးပြုနိုင်။ လိုက်နာကျွန်တော်တို့ကိုအသေးစိတ်အချက်အသစ်အကြောင်းကိုဗီဒီယိုချက်တင်။ အပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံး၊ဒါကြောင့်နည်းမှန်လမ်းမှန်ကိုရှာတွေ့ဖို့အသစ်ဆက်ဆံရေးကို၊မင်၊ပင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ။ သင်ရှိပါကသင်လိုအပ်သမျှကိုအဘို့အလှန်အချက်အလက်အင်တာနက်ပေါ်မှာ၊သင်သိသိသာသာသင့်အသက်တာကိုပိုမိုကောင်းမွန်။ စာသားစကားအရေအတွက်ရှိပါတယ်ရဲ့သိသာနည်းချက်များ။ အတွက်ဗီဒီယိုစကားပြောခန်း၊သငျသညျအရနိုငျသိရဖို့အသီးအသီးအခြားဖြင့်စတင်တကယ့်စကားလက်ဆုံ။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့၊မပိုမိုကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းရှိသရောက်ဖို့တစ်စုံတစ်ဦး၏အခြားဘက်ခြမ်းမှ။ ကျပန်းအွန်လိုင်းဗီဒီယိုချက်တင်ချိတ်ဆက်သင်နှင့်အတူတစ်ဦးပြီးပြည့်စုံသောလူစိမ်းကနေအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ဖလားကျော်။ သငျသညျရှေးခယျြနိုငျအချို့ဦးစားပေး၊ဒါပေမယ့်အခုထိမသိရပါဘူးသောသူအနောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းလိမ့်မည်။ အကောင်းဆုံးဗီဒီယိုချက်တင်လုပ်ခြင်းအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်၊ဒါကြောင့်သင်စိုးရိမ်ပူပန်ရန်ရှိသည်ဘယ်တော့မှပိုက်ဆံနှင့်ပတ်သက်။ ပဲပြောနေတာဖွင့်ဖွင့်သင့်ရဲ့ဒေတာတွေကိုနှင့်၊စကားပြောခန်းအဖြစ်အကြိမ်ပေါင်းများစွာသင်လိုချင်တဲ့အတိုင်း။ ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုဘဲ မှတ်ပုံတင်။ မည်သည့်ချက်တင်၊ဗီဒီယိုများအမြဲဖြစ်ကြသောကျယ်ပြန့်ပွင့်လင်းအတွက်ဒီအပေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ကိုစုဆောင်းကောက်ယူကြပါပြီအားလုံးနီးပါးအဆိုပါအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုများကိုအဘို့အချိန်းတွေ့လျင်မြန်စွာဗီဒီယိုများ။ ဒါဟာအစတစ်အွန်လိုင်းချက်တင်အမည်နိုင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်ချိန်းတွေ့စတင်အလွန်လျှင်မြန်စွာ။ အတွက်ဗီဒီယိုစကားပြော၊သင်ဘယ်တော့မှလိမ့်မည်ဟုအသိအမှတ်ပြုရန်။ လျှင်ထိုကဲ့သို့သောအစည်းအဝေးများသောအားဖြင့်အတူအဆုံးသတ်သည့်အဆက်အသွယ်၏အချက်အလက်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမှလင့်များအတွက်မေးခွန်းတွေအသိုင်း၊ထို့နောက်မည်သည့်အစည်းအဝေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်၊ဖြစ်ခြင်းအတွက်ဗီဒီယိုချက်တင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသက်တာ။ သတိရရမယ်စောင့်ရှောက်အချို့သောအရှေ့ကာလအတွင်းဗီဒီယိုချက်တင်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်မြင်နှင့်အကြား၊ကြိုးစားကြည့်ကောင်းရှုကောင်းရန်။ ကြိုးစားမှအပြုံးနှင့်ရင်းနှီးဖော်ရွေ၊ကူညီကြမည်၊အကောင်းဆုံးအတွက်လူတိုင်းစကားပြောနှင့်အထောက်အပံ့။ သို့သော်သင်သည်လည်းဖြည့်ဆည်းချင်သူလူများရန်အတွက်သင်စကားပြော။ ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စရပ်များတွင်၊အရေအတွက်ကိုဗီဒီယိုချက်တင်အတူအသုံးပြုသူများပေးဖို့အခွင့်အလမ်းကိုဖိုင်မရှိပါ။ စိတ်ကိုထားပါမဆိုအမှု၌၊သင်ချက်ချင်းကြည့်ရှု၊သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်ကိုဆက်သွယ်ထားသောပြီးနောက်။ မ သင့်အလွဲသုံးစားဤအချက်ကိုမြင်ရန်ချင်သူလူကငါမျှော်လင့်သင်သည်နားလည်သဘောပေါက်အကြှနျုပျတို့အဘယ်သို့ဆိုလိုသည်။ ထိုကွောငျ့၊ကျနော်တို့အကြံပြုပါသည်သင်ပထမဦးဆုံးသတ်မှတ်ရည်မှန်းချက်သင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အတွက်ရှာဖွေနေများအတွက်ချစ်ကြည်။
လူကဒီမှာ။"နှင့်ယခုမရှိမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်အခမဲ့ဝက်၏။ ဓါတ်ပုံတွေကြည့်၊မက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်ပိုပြီးအခြားသူများ။ ဒီကူညီလိမ့်မည်သင်သည်အတွေ့သစ်အသိအကျွမ်းအဖြစ်ဖုန်းနံပါတ်များ၏ဆိုဒ်အဖွဲ့ဝင်များအချိန်တိုအတွင်း။ တစ်ဝက်တစ်လက်ဖက်ရည်ဇွန်းထောပတ်သီးရေနံ-အဘယ်မှာရှိအကောင်းဆုံးရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နှင့်အတူဓာတ်ပုံနှင့်ဖုန်းအရေအဆင္ေတြမပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်အခမဲ့။ တွေ့ဆုံရန်ချင်မိန်းကလေးများသို့မဟုတ်အမျိုးသားနှင့် အွန်လိုင်းချက်တင်၊မိမိအဓါတ်ပုံများနှင့်ဖုန်းကိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအောင်။ ထိုအခါ၊အသုံးပြုမှုများ၏အ ဝက်ဘ်ဆိုက်၊မှတ်ပုံတင်နှင့်အခမဲ့သုံးစွဲဖို့အပေါင်းတို့သည်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ဆိုက်၏၊နေ့တိုင်းရှိတယ်အသစ်အစည်းအဝေးနှင့်အသိအကျွမ်းခြင်းအားဖြင့်များ၏အရေအသင်တန်းသားများထံမှအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ဖလားကျော်။ ယနေ့ခေတ်အသုံးပြုခြင်းရဲ့ဝန်ဆောင်မှု၊သငျသညျရှေးခယျြနိုငျအများ၏ဓါတ္ပံုမိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားလေးများ၊သူတို့ကိုခရီးဦးကြိုပြု၊ပင်ဖုန်းကိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအောင်။ တက်လက်မှတ်ထိုးနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုယခု။
သင်ထုတ်ဝေအပေါ်အခမဲ့အဘို့သင်တို့ဝက်ဘ်ဆိုက်။ အတည်ပြုသင့်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့စတင်ရှာဖွေနေများအတွက်အသစ်အသိအကျွမ်း၏လမ်းများပေါ်တွင်ရိလကၤာဂါနှင့်စကားပြောနှင့်ရပ်ရွာမပါဘဲမည်သည့်ကန့်သတ်ခြင်းနှင့်ကန့်သတ်။ တွေ့ဆုံသငျသညျအဘယျသို့အလိုနှင့်အတူကစားတစ်ဦးယောက်ျားလေးသို့မဟုတ်မိန်းကလေးအတွက်သီရိလင်္ကာနှင့်လုံးဝအခမဲ့။ ချိန်းတွေ့မပါဘဲတနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်မရှိကန့်သတ်အပေါ်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်စာပေးစာယူ၊အတုအကောင့်များနှင့်ကန့်သတ်။ လူကိုရှာဖွေဒီမှာမိတ်ဆွေတွေရဲ့မိတ်ဆွေတွေ၊တက်တွေ့ဆုံရန်နှင့်ရရန်အတွက်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး။ သင်ထုတ်ဝေအပေါ်အခမဲ့အဘို့မိမိတို့ဝက်ဘ်ဆိုက်။ ရသင့်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့စတင်ရှာဖွေနေများအတွက်အသစ်အသိအကျွမ်း၏လမ်းများပေါ်တွင်ရိလကၤာဂါနှင့်စကားပြောနှင့်ရပ်ရွာမပါဘဲမည်သည့်ကန့်သတ်ခြင်းနှင့်ကန့်သတ်။
သင်တကယ်လိုချင်တာကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ကိုယ်စားလှယ်များ၏လှပသောအနက်ဖြန်နေ့တစျနေ့ကသင်သည်သင်၏ဇာတိမြို့၊သင်ဖို့ရှိသည်မဟုတ်တော့ကြိုးစားကျော်လွှားရန်သင်တို့၏သဘာဝအလျောက်သို့မဟုတ်ရှက်ကြောက်ရှက်ကြောက်။ သို့ဦးတည်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အတွက်မြို့တော်ကိုမိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူ၊ရင်းထွက်ခွာနေအိမ်-ဒါကြောင့်ကိုယ့်လိုအပ်တဲ့ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်ဖုန်း။ အရေးပါသောအားသာချက်၏ဒီအမျိုးအစားချိန်းတွေ့အကြံဉာဏ်များအတွက်ကြောင့်အများကြီးပိုမိုလွယ်ကူချိန်းတွေ့စတင်လာတဲ့အမျိုးသမီးများအတွက်ဂျပန်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့၊ကျနော်တို့စိတ်ထဲမထားကြပါဘူးအစည်းအဝေးရှိသည်သောသူလူအဖြူကောင်မှတ်ပုံတင်အပေါ်အဖြေမိန်းကလေးရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ပြီးတော့တည်ထောင်တယ္။ အတွက်ဂျပန်၊နံပါတ်များကိုဖော်ပြမထားပါဘူးသုံးမိန်းကလေးများ'ဖုန်းများကိုရော၊ဒါပေမယ့်မှကြွလာသောအခါအဆိုပါဖုန်း၊ကျနော်တို့ကမ်းလှမ်းမှုကိုအဆင်ပြေဖို့အခွင့်အလမ်းများမျှဝေအမည်မသိနှင့်အတူ။ နှင့်သင်ကိုယ်တိုင်လက်ခံပြီးနောက်ငယ်လေးတစ်စကားပြောဆိုမှု၊ဆုံးဖြတ်မျှဝေဖို့သင်၏ဖုန်းများနှင့်အတူသင့်ရဲ့မိတ်ဆွေ။ ဒါဟာဖို့အရေးကြီးကြောင်းပြောရုရှားမိန်းကလေးများအစဉ်အမြဲပေါ်ချိတ်ဆက် ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ။ ထိုသူအချို့တို့သည်နေ့တိုင်းကြီးထွားလာ၊ဒါကြောင့်မိနစ်အနည်းငယ်ကြာအခမဲ့အချိန်ယနေ့အချိန်တွင်ဖန်တီးရန်အသင့်ပရိုဖိုင်းကိုနှင့်စတင်က်ပ္။ ကိုယ့်ခံစားချက်များအကြောင်းအရာတစ်ခုခုကအမှန်တကယ်အလွန်ရိုးရှင်းသော။ ကျနော်တို့စိတ်ရင်းမှန်မျှော်လင့်ကြောင်းသင်ကူညီနိုင်သူမည်သူမဆိုတည်ဆောက်ရန် အားကြီးသောဆက်ဆံရေး။
သင်တွေ့ဆုံနိုင်ပါလူဝက်ဘ်ဆိုက်ကနေရုရှားကမ်းတစ်ခုအလေးအနက်ဆက်ဆံရေးနှင့်မိသားစု။ များစွာသောလူတို့အပေါ်ဆိုက်ရှိဖခင်တစ်ဦး၏၊ဒါပေမယ့်ကျနော်စိတ်ဝင်စားမဟုတ်သောအစည်းအဝေးတစ်ခုတည်းမိခင်၊ဒါဟာအများအတွက်ရည်ရွယ်အားလုံးရုရှားစကားပြောတဲ့လူများထံမှရုရှားပူးပေါင်းပြီး။ သင်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်အပေါင်းတို့အတွက်အမျိုးသားများဧရိယာကိုအပေါ်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်လင့်ခ်နှင့်အတူသူတို့၏အမည်သို့မဟုတ်အဆင့်မြင့်ရိုရှာ။။။ ဆိုက်ပေါ်တွင်သင်ဖြည့်ဆည်းနိုင်မှယောက်ျားရုရှားအတွက်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေးနှင့်မိသားစု။ များစွာသောလူတို့အပေါ်ဆိုက် ရှိဖခင်တစ်ဦးအတွက်စိတ်ဝင်စားမဟုတ်အစည်းအဝေးတစ်ခုတည်းမိခင်၊အတွက်ချက်ပူးပေါင်းဖို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုရုရှားပီရုရှားထံမှ။ အားလုံးရှာတွေ့နိုင်ပါသည်အမျိုးသားများအတွက်ဧရိယာအဖြစ်အောက်ပါအတိုင်းချိတ်ဆက်မှသူ၏အမည်၊သို့မဟုတ်အဘို့အသွားအဖြစ်အသက်အရွယ်၊မခိုးနှင့်၊မခိုးနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများအလုပ်၊ပြာမျက်စိ။ အလင်းအညိုရောင်ဆံပင်၊အရှက်၊ပိန်ခန္ဓာကိုယ်။ ကွာရှင်း၊ထိုမိန်းမအဘို့အရှာနေအသက်အဘို့၊ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးအသောက်၊မီးခိုး၊အစာစား၊ဟာသကိုခံစား။ လက်ပေါက်လက်ျာအရပ်ဌာန၌။ ငါဂရုမစိုက်ပါဘူးကြောင်းငါရှာနေတာပါအနက်အလှန်ဆက်ဆံရေး။ ကွာရှင်း၊သားသမီးမရှိ။ တွေ့အကောင်း၊အကောင်း၊ကြွေးမြီ-အခမဲ့အလုပ်နှင့်ဗေ။ အပြုသဘော
သင်ထုတ်ဝေနိုင်အခမဲ့အဘို့သင့်ကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်။ သင်အတည်ပြုသင့်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့စတင်ရှာဖွေနေများအတွက်အသစ်အသိအကျွမ်း၏မြို့အတွက်ဟူစတန်တက္ကဆက်ပြည်နယ်နှင့်စကားပြောနှင့်ပူးပေါင်းလူထုမပါဘဲမည်သည့်ကန့်သတ်ခြင်းနှင့်ကန့်သတ်။ ငါလိုချင်တာကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အတန်ယောက်ျားလေးသို့မဟုတ်မိန်းကလေး-ကျိန်းသေအခမဲ့။ ချစ်ကြည်ရေးနေ့အပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ကိုကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲအပေါ်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်စာပေးစာယူ၊အတုအကောင့်များနှင့်ကန့်သတ်။ ဤသည်အဘယ်မှာရှိလူအချင်းချင်းတွေ့ဆုံအသီးအသီးအခြား၊နှင့်အဝင်အနက်ရှာ။။ သင်ထုတ်ဝေအပေါ်အခမဲ့အဘို့သင်တို့ဝက်ဘ်ဆိုက်။ အတည်ပြုသင့်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့စတင်သင့်ရှာဖွေတွေ့သစ်အသိအကျွမ်းအတွက်တက္ကဆက်ပြည်နယ်ဟူစတန်၊နှင့်ချိတ်ဆက်ချိတ်ဆက်ဃာနှင့်အတူမည်သည့်ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲသို့မဟုတ်ကန့်သတ်။
သင်ထုတ်ဝေနိုင်အခမဲ့အဘို့သင့်ကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်။ အတည်ပြုအတွက်ရှာဖွေနေစတင်အသစ်အသိအကျွမ်းအတွက်ဟောင်ကောင်နှင့်ချက်တင်အတွက်အခန်းပေါင်းစကားပြောခန်းနှင့်အသိုင်းအကန့်သတ်ခြင်းနှင့်ကန့်သတ်။ လိုချင်တာကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ယောက်ျားတစ်ယောက်သို့မဟုတ်မိန်းကလေးအတွက်ဟောင်ကောင်နှင့်လုံးဝအခမဲ့။ ချစ်ကြည်ရေးနေ့တွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ဟာတု၊မည်သည့်ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲအပေါ်အဆက်အသွယ်များနှင့်စာပေးစာအကောင့်များနှင့်ကန့်သတ်။ ဤသည်အဘယ်မှာရှိလူအချင်းချင်းတွေ့ဆုံရသို့အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး။ သင်ထုတ်ဝေအပေါ်အခမဲ့အဘို့သင်တို့ဝက်ဘ်ဆိုက်။ အတည်ပြုသင့်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့စတင်အသစ်တစ်ခုကိုအသွယ်ရှာဖွေရေးအတွက်ချက်တင်နှင့်မည်သည့်ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲနှင့်ကန့်သတ်၊နှင့်အတူအသိအကျွမ်းသာေဟာင္ေကာင္။
သင်ပင်ပန်း။ ၾကည့္ရႈသည္ျဖင့္ကွဲပြားခြားနားသော တိပေး။ စိတ်ပျက်နှင့်အတူသူတို့ကိုသို့မဟုတ်ပန်းစည်းအဝေး၏သူတို့ကိုသူတို့အလုပ်လုပ်ကြောင့်ကြာမြင့်စွာနာရီနှင့်အခက်များတွင်ပါဝင်ရန်။ မအားလျော့၊အခြားနိုင်ပါသည်အချိန်အနည်းငယ်ကြာ၏ကျန်သုံးဖြုန်းရန်သင်၏အချိန်နှင့်အတူသင့်ဘဝအသက်တာ၊ ဒါပေမယ့်ချင်တယ်ဆိုရင်သင်ရော၊သိနေရကျနော်တို့ရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်သင်သေချာသင်ကျေနပ်အောင်လိမ့်မည်သင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာများကြီးပိုမြန်။ ယခုသင်ရပ်တန့်ရှာဖွေတာအကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေတွေရအောင်တက်တွေ့ဆုံရန်။ ရှာအမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးမည်သူအတွက်ကောင်းစွာသင့်ဒေသသို့မဟုတ်ကမ္ဘာအဝှမ်းနေ့။ ထွက်စစ်ဆေးသင့်လက်၊တကယ်တော့၊သာပရိုဖိုင်းအပေါ်တွေ့ဆုံရန်။ ပို။ မေးခွန်း။ သောင်းချီသောလူများ၏ထောင်ပေါင်းများစွာ၏အဆက်မပြတ်အွန်လိုင်း။ ကျနော်တို့ရောအရမ်းပျော်စရာစစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်းအက္ပ္ကိုပါဝင်သည်ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းများ၊ဗီဒီယိုစကားပြောခြင်း၊နှာ၊နှာများနှင့်မိုဘိုင်းဖုန်းဗားရှင်း။ အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့သည်အထဲတွင်ရှာတွေ့ရန်လွယ်ကူသင့်ရဲ့ဧရိယာနှင့်အနီးတဝိုက်။ ကျွန်တော်တို့ဟာအလွန်ကြီးစွာသောကြိုးစားအားထုတ်မှုစောင့်ရှောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေများကိုအဘို့ဘေးကင်းလုံခြုံ။ အားလုံးအစီရင်ခံစာ၏ချိန်းတွေ့ဆိုက်အလွဲသုံးမှုဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိအရမ်းလေးလေးနက်နက်-လုံးဝအခမဲ့နှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံ။ ဆွဲထားအတွက်ကြောင့်သင့်ဒေသခံကော်ဖီဆိုင်ကိုရှာဖွေချစ်ခြင်းမေတ္တာဖို့။ ကျနော်တို့နားလည်သဘောပေါက်ဖို့ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်တွေ့ဆုံရန်သောသူလူအလားတူအကျိုးစီးပွားနှင့်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဧရိယာ၊ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကူညီနိုင်။ ဒါဟာသင့်ကိုကူညီလိမ့်မယ်ရှာလိုက်ဖက်သောအမျိုးသားသို့မဟုတ်အမျိုးသမီးအဘယ်သူမျှမကိစ္စအဘို့ရှာကြသည်လျှင်မေတ္တာအနီးသင်သည်သင်၏နေအိမ်သို့မဟုတ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချိန်းတွေ့ဒေတာဘေ့စင်အရည်အသွေးမြင့်မားပရိုဖိုင်းလူမျိုး၏နေထိုင်မှုအတွက်၊ရုရှားအတွက်၊ပိုပြီးကမ္ဘာတဝှမ်းနိုင်ငံပေါင်း။ ငါသူတွေးမိမယ့်ဆိုက်ပေါ်တွင်မနေသင်သည်သင်၏ဧရိယာ၌။ လူတစ်ဦးအသက်ရှင်လာမည့်တံခါးကိုစေခြင်းငှါ၊သင်၏နောက်ချိန်းပြီးနောက်နေ့စွဲဖြစ်မည်အကောင်းဆုံးသင်သည်သင်၏အသက်တာ၏။
သင်ထုတ်ဝေနိုင်အခမဲ့အဘို့သင့်ကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်။ သင်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်သင့်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့စတင်ရှာဖွေနေများအတွက်အသစ်အတွက်အသိအကျွမ်းနှင့် ချက်တင်ချက်တင်နှင့်အသိုင်းအသင့်ရဲ့ကန့်သတ်။ သင်လိုချင်တာကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ယောက်ျားတစ်ယောက်သို့မဟုတ်မိန်းကလေးအတွက် ကလုံးဝအခမဲ့။ ချစ်ကြည်ရေးနေ့တွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ဟာတု၊မည်သည့်ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲအပေါ်အဆက်အသွယ်များနှင့်စာပေးစာအကောင့်များနှင့်ကန့်သတ်။ ဤသည်အဘယ်မှာရှိလူအချင်းချင်းတွေ့ဆုံရသို့အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး။ သင်ထုတ်ဝေအပေါ်အခမဲ့အဘို့သင်တို့ဝက်ဘ်ဆိုက်။ အတည်ပြုသင့်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့စတင်ရှာဖွေနေသစ်ကိုသူမြားကိုအမျှဝေသင့်အသိအကျွမ်းအတွက် နဲ့ချက်တင်ချက်တင်နှင့်မည်သည့်ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲသို့မဟုတ်ကန့်သတ်။
ငါအသက်ရှင်သောအတွက်အနောက်ဂျာမနီနိုင်ငံ၊အင်တာနက်နှင့် ၊ငါသည်နံနက် နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်တည်ငြိမ်သောမိန်းမဖို့အများဆုံးဖွယ်ရှိသည်၊အတူတကွနေထိုင်။ ဒါ့အပြင်၊သင်ယူဖို့လိုပါလျှင်၊သို့ဖြစ်လျှင်ဤကြီးမြတ်ပါလိမ့်မယ် ဆင်ခြေများအတွက်အလေးအနက်။ ကၽြႏ္ုပ္၏ဖုန်းနံပါတ်နှင့်ငါသည်သင်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါလိမ့်မည်။ ငါ့နာမကိုအနြေ္ဒ။ ငါအသက်ရှင်သောအတွက်ဂျာမ။ ငါချစ်ပန်းချီရေနံသုတ်ဆေးနှင့်ဖုတ်။ ငါချက်ပြုတ်အရသာတစ်ခုခု။ ငါအခမဲ့အချိန်။ ကိုပိတ်ထား။ ရောင်ရမ်းခြင်း၏အဆစ်။ ငါသည်ကိုယ့်အလိုကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ကောင်းတစ်သူတစ်ဦး။ ကြောင့်စောင့်ရှောက်ဖို့နွေးနှင့်အဆင်ပြေ။ နှင့်အခြားအဘယ်အရာကိုလိုအပ်နေပါသည်။ တူညီပြဿနာများနှင့်အတူပိုကောင်း။ ကြွင်းသောအရာအတွက်ပြု။ မင်္ဂလာပါ။ သင်ပေါ်မှာဆိုရင်ရည်းစားစာရင်းတွင် နှင့်ဤအသတ္ရိွသည္။ သင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်ဒီမှာ၏ကိုယ်ရေယောက်ျားအပေါ်တစ်ဦးချိန်းတွေ့ဆိုက်အတွက် ၊ဖဳတ္၊အခမဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်း။ တစ်ချိန်ကသင်တက်လက်မှတ်ထိုးအဖြစ်၊သင်သုံးစွဲနိုင်ပါလိမ့်မယ်လူမှုရေးနှင့်အတူအမျိုးသားများနှင့်ရှငျလူများအတွက်အခြားမြို့ကြီးများ၊အရာကသင်တို့အားယူလိမ့်မည်မိနစ်အနည်းငယ်။ သောသူအပေါင်းတို့ကလူတွေ့ဆုံရန်ချင်၊မေတ္တာကိုရှာတွေ့၊အတွေ့အခြားတစ်ဝက်ကို၊လက်ထပ်ထိမ်းမြားသို့မဟုတ်မင်္ဂလာဆောင်တွင် ၊ဖဳတ္၊ပျော်ရွှင်ဖွယ်အားလပ်ရက်များ။
တီထွင်ဒီမှာရရှိနိုင်ပါနှင့်ယခုအခမဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်အပေါ်ဘဏ်ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်။ ဓါတ်ပုံတွေကြည့်၊မက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်ပိုပြီး။ ဒီကူညီလိမ့်မည်သင်သည်အတွေ့သစ်အသိအတိုဆုံးဖြစ်နိုင်သောအချိန်ဖြစ်သောဖုန်းနံပါတ်အားလုံး၏အဖွဲ့ဝင်များ၏။ တစ်ဝက်တစ်လက်ဖက်ရည်ဇွန်းထောပတ်ဆီ၊အကောင်းဆုံးအကြောင်းမိတ်ဆက်ဓာတ်ပုံနှင့်ဖုန်းအရေအတွက်လောလောဆယ်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်ဖြည့်ဆည်းဖို့ဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်အခမဲ့။ တွေ့ဆုံရန်ချင်မိန်းကလေးများသို့မဟုတ်ယောက်ျားလေးများစကားပြောမှာဘဏ်နှင့်အွန်လိုင်းချက်တင်၊သူတို့ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ဖုန်းကိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအောင်။ ထိုအခါ၊အသုံးပြုမှုများ၏အ ဝက်ဘ်ဆိုက်၊မှတ်ပုံတင်နှင့်အခမဲ့သုံးစွဲဖို့အပေါင်းတို့သည်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ဆိုက်၏၊နေ့တိုင်းရှိတယ်အသစ်အစည်းအဝေးနှင့်အသိအကျွမ်းခြင်းအားဖြင့်များ၏အရေအသင်တန်းသားများထံမှအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ဖလားကျော်။ ယနေ့ခေတ်အသုံးပြုခြင်းရဲ့ဝန်ဆောင်မှု၊သငျသညျရှေးခယျြနိုငျအများ၏ဓါတ္ပံုမိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားလေးများ၊သူတို့ကိုခရီးဦးကြိုပြု၊ပင်ဖုန်းကိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအောင်။ တက်လက်မှတ်ထိုးနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုယခု။
ငြီးငွေ့ရောက်နေတယ်ဆိုရင်ၾကည့္ရႈသည္ျဖင့္ညီတဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များတိပေးကြောင်း။ သင်ပင်ပန်း။ ကနေရောကြောင့်စိတ်ပျက်နှင့်အတူသူတို့ကိုသို့မဟုတ်နာရီပေါင်းများစွာအလုပ်လုပ်ရန်ခက်ခဲသည်ပါဝင်ရန်အတွက်အသက်။ မကြံယူစေခြင်းငှါအချိန်အကြာကြီးလူကျန်သုံးဖြုန်းရန်ချင်တယ်ဆိုရင်သင်တွေ့ဆုံရန်ကျေးဇူးပြုပြီးပူးပေါင်းပြီး၊ကျနော်တို့သေချာပါစေဖို့အရုပ္ခ်စ္သူမ်ားအတြက္အချစ် သင်ဖို့အများကြီးပိုမြန်။ ယခုသင်ကရှာဖွေနေကိုရပ်တန့်နိုင်ကိုအကောင်းဆုံးရက်စွဲနှင့်တက်တွေ့ဆုံရန်အခုအချိန်မှာ။ လက်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများပြုလိမ့်မည်ကောင်းစွာသင့်ရဲ့ဧရိယာထဲမှာသို့မဟုတ်ကမ္ဘာအဝှမ်းနေ့။ ကိုယ့်တစ်ဦးအရောအပေါ်ပရိုဖိုင်ကိုတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်၊စစ်ဆေးပါ။ ပို။ မေးခွန်း။ သောင်းချီသောလူများ၏ထောင်ပေါင်းများစွာ၏အဆက်မပြတ်အွန်လိုင်း။ ကျွန်တော်ချိန်းတွေ့၊ဒါကြောင့်လည်းတစ်ပျော်စရာစစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်းအက္ပ္ကို၊ဗီဒီယိုလည်းပါဝင်သည်မဂ္ဂဇင်းများ၊ဗီဒီယိုစကားပြောခြင်း၊နှာ၊နှာများနှင့်မိုဘိုင်းဖုန်းဗားရှင်း။ အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အတွက်အသင့်ရဲ့ဧရိယာတစ်ဝိုက်၊အလွယ်တကူရှာတွေ့။ ငါတို့သည်ဖန်ဆင်းအလွန်ကြီးစွာသောကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကြောင်းသေချာစေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အစည်းအဝေးများအတွက်ဘေးကင်းလုံခြုံ။ အားလုံးမိစ္ဆာနှင့်ချိန်းတွေ့ဆိုက်ကိုအသုံးပြုမှုအစီရင်ခံစာများမှာအလွန်နက်။ နေလုံးဝအခမဲ့နှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံ။ ခရီးဒေသခံတစ်ဦးကကော်ဖီဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုရှာတွေ့။ ကျွန်တော်နားလည်တဲ့လူစည်းဝေးခက်ခဲနိုင်ပါတယ်အဖြစ်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ဘုံအခြေစိုက်စခန်းနှင့်ရည်မှန်းချက်။ ပထဝီဧရိယာ၊ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကူညီနိုင်။ အဘို့ရှာကြသည်လျှင်တစ်ဦးရင်းနှီးချစ်ကြောင့်သင်ကူညီလိမ့်မည်ရှာဖွေတစ်ဦးသဟဇာတဖြစ်သောယောက်ျားမိန်းမအိမ်သို့မဟုတ်ကမ္ဘာနှင့်အတူ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ချိန်းတွေ့ဒေတာဘေ့စဝင်အရည်အသွေးမြင့်မားပရိုဖိုင်းလူမျိုး၏နေထိုင်မှုအတွက်ရုရှား၊ပိုထက်ကမ္ဘာတဝှမ်းနိုင်ငံပေါင်း။ ငါသည်သင်တို့ကိုအံ့ဘွယ်သောသင်၌နေသောသူအပေါ်အကွက်ချိန်းတွေ့ဆိုက်လူတစ်ဦးအသက်ရှင်လာမည့်တံခါးကိုစေခြင်းငှါ၊သင်၏နောက်ခရီးနှင့်သင်သည်သင်၏နောက်ရက်စွဲဦးတည်စေခြင်းငှါအကောင်းဆုံးသင်သည်သင်၏အသက်တာ၏။ အစီအစဉ်ရှာနည်း:လူတစ်ဦးဌာနမှူး၊မိန်းကလေးအရေးမပါဘူးအဘို့အရှာဖွေနေ:အရေးပါသောယောက်ျား၊အမျိုးသမီးမပါဘူး အသက်အရွယ်:-အဘယ်နေရာတွင်:မော်စကို.
-ကြော်ငြာများထုတ္ေသာရုပ်တုဆင်းတုနှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်အားဖြင့်အဘယ်သူမျှမပိတ်ပီးလိင်၊ကစားစရာအရုပ်၊အနိမ့်အစိတ်အပိုင်းများမတု၊လိင်ဓာတ်ပုံ၊အဘယ်သူမျှမရှာ၊မိန်းကလေးအဝတ်အချည်းစည်းသင်၏အိပ်မက်နှစ်ရည်အသွေးအကြောင်း၊ရေရှည်ဦးစားပေးထည့်သွင်းသင့်လက်၌သင်၏အတြင္းခံေဘာင္းဘီမ်ားဒေသအများစုတွင်အပြည့်အဝ၊သန့်ရှင်းလှပဒသက။ ကျန်ရှိသောပစ္စည်းစာရင်းမပြည့်စုံသို့မဟုတ်ဖျားနာခြင်း၊ဒါပေမယ့်ငါစဉ်းစားမည်အားလုံးအသက်အရွယ်၏တနှစ်။ ကျွန်မအတွက်ဖြစ်လိမ့်မယ်မော်များ၏စုံတွဲတစ်တွဲရက်။ ငါဖြုန်းချင်ပါဘူးတဲ့ညတည်းသာဟိုတယ်အခန်း။ ကံမကောင်းစွာပဲ၊ငါယူ၏။ ဒါကြောင့်ကျွန်မပျော်ရွှင်ဖြစ်ရလိမ့်မယ်လျှင်တစ်စုံတစ်ယောက်ကကူညီနိုင်ငါ့ကိုအထွက်ကိုယနေ့ည။ အရေးအပါဆုံးအရာအလိုတူဖြုန်းဖို့တစ်သိုင်းကြိုး-တွင်၊ဒါပေမယ့်မအဖြစ်ခင်၊ငါသည်စောင့်ဆိုင်းနေပါသည်ဖိတ်ကြားချက်ကိုဝန်ကြီးချုပ်၏အ။
ထွက်ဟန်ချက်ထက်ပျှမ်းမျှဟောင်းထောက်ပံ့ရေးမန်နေဂျာသာေမာ္ေတာ္ကားဟာသ၊ဖွယ်ရှိ။ ဒါပေမယ့်ဆဲလိုခရီးတွေအများကြီး။ ငါ့သူငယ်ချင်းတွေခေါ်ၽြန္ုပ္၏လုံ့။ ကံမကောင်းစွာပဲ၊ငါမကယ်မနှုတ်နိုင်။ အားလုံးအတွက်ကျယ်ပြန့်သောချိန်းတွေ့အတွေ့မှာမဟုတ်တဲ့အမျိုးသမီးကိုတွေ့အကြုံအရာအားလုံးကို၊နှင့်သင်၏သင်တန်းငါသည်အရှည်လျားပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့၏အသက်တာကောင်းသောခံစားချက်။ အံ့သြဖွယ်အမျိုးသမီးမည်သူနှင့်အတူအသက်ရှင်လျှင်ငါ့ကိုအရာအားလုံးကောင်းစွာဝင်၊အားလုံးအတွက်အနွေးထွေးအိမ်တော်၏ဗဟိုအတွက်မြို့အဆဲအကောင်းတစ်ဦးဘဝကိုအတူအားလုံး၎င်း၏ဆွဲဆောင်မှုတွေထဲက။ မင်္ဂလာပါလူတိုင်း၏ဗဟိုအတွက်၊ရုရှားနိုင်ငံ။ ငါသည်အသက်ရှင်သောအကြားဒီမာဒင်းနှင့်မော်စ။ အလင်းသည်ဖန်တီးခြင်းအားဖြင့်အနုပညာရှင်တစ်ဦးအကိုင်အားဖြင့်။ ငါတည္း၊ငါ၏သားတစ်ဦးအရွယ်ရောက်ပြီး။ ဝါသနာ၊အနုပညာ၊ပြဇာတ်၊တေးဂီတ၊ခရီးသြားျခင္း။ ငါရှာနေတာပါအဘို့တစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူအလားတူအကျိုးစီးပွားများအတွက်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ချစ်ကြည်ရေး၊ဆက်သွယ်ရေး၊ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပိုင်း။ ကျွန်မလေးမြတ်တန်ဖိုးထားတစ်ဦးအားကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏ထောက်လှမ်းရေး၊ငါသတ်မှတ်သင်တို့၏သဘောအဟာသက။ မေး:သင်ဘယ်လိုအသက်ရှင်ငါချက်ချင်းတို့သည်:အရာအားလုံးဒဏ်ငွေဖြစ်ပါသည်။ ငါလိုချင်တာရှာဖို့ကျွန်မရဲ့အကောင်းဆုံးယောက်ျားကနေမော်သောကြောင့်၊ငါသည်လှုပ်ရှားမှမော်စကိုအသက်ရှင်ရန်၊လိုအပ်တော်မူသောတစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူငါလျင်မြန်စွာဆက်သွယ်ပြောဆို၊အတိုင်ပင်ခံ၊နှင့်ထိုအချိန်အဖြေပါလိမ့်မယ်။ ငါသည်တယောက်တည်းနေထိုင်၊သင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ၊အသက်ရှင်သောသူတို့သီးခြားစီ။ ဗလာဒီမာ။ ဒီနေရာတွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်သုံးစွဲသူပရိုဖိုင်းအတွက်အခမဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်းရှိသမျှကျော်ကနေ။ ဆိုက်ကိုအမည်ဖို့အခွင့်မှတ်ပုံတင်နှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုလူမမာလမ္း၊ဒါပေမယ့်လည်းအခြားတိုင်းဒေသကြီးနှင့်တိုင်းဒေသကြီးသောလူနေဒေသများ။ သင်ချင်တယ်ဆိုရင်ထွက်ရှာဖို့မေတ္တာ၏အသိအကျွမ်း၊မိတ်ဆွေတွေကိုရှာဖွေခွဲ၊ကျနော်တို့သင်တို့အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွက်။.
ထိုဆိုက်တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းစာမျက်နှာသို့လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။ သင်လိုအပ်လျှင်အတည်ပြုသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုအမှုအရေအတွက်၊သင်ဆက်သွယ်နိုင်သည်အသစ်အသိအကျွမ်း၊အမျိုးသမီးအတွက် ၊တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှစကားပြောဖုန်းပေါ်မှာအစက်အပြောက်။ အဲလည်းကောင်းတစ်ကွန်ယက်၏အမျိုးသမီးနှင့်မိန်းကလေးများခေါ်။ အရေအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များအတွက်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်စာပေးစာယူနှင့်အတူအတုအကောင့်န့်အသတ်ဖြစ်။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်၊ကျနော်တို့ဖြည့်ဆည်းခြင်းနှင့်မဝင်ရ။ ထိုဆိုက်တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းစာမျက်နှာသို့လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။ အရှာကြသည်လျှင်သင်အသစ်တစ်ခုကိုကျွမ်းခြင်း၊သင်ဖုန်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ဓါန္မွလွိဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါလူကြိုက်အခမဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်းမရှိဘဲအဆင်ပြေပြေနဲ့အဆင်ပြေ ဦးကြိုပြုခြင်းစိတ်ဝင်စားဖို့ဆွဲဆောင်မှု။ အသစ်တခုဖွင့်ဖို့နှာတွင်၊ရုံကနေတဆင့်သွားပုံစံဆိုက်ပေါ်တွင်နှင့်အဘို့အကြည့်အသစ်အသိအကျွမ်း။ အကောင်းဆုံးကိုရွေးချယ်ပြိုကွဲရှာရွေးချယ်စရာသင်ချင်ရစုံလင်သောအတွက်ရလဒ်မရှိပါ။ အပြည့်စုံသောဖြေရှင်းချက်အတွက်ရောအခုမှအလျင်အမြန်နဲ့အလွယ်တကူအသစ်အသိအကျွမ်းများ၊စသည့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်စကားပြောဆို၊သင်ဖိတ်ခေါ်ရန်သားဖွားခန့်ရှိသည်၊တစ်ဦးရင်ခုန်စရာနေ့စွဲနှင့်အစည်းအဝေးတစ်ခုမမေ့နိုင်သော။ ကျနော်တို့အလွန်ပျော်ရွှင်လျက်ရှိကြသည်ကိုသင်အကြောင်းကြားဤသည်ရေတွင်းတစ်တွင်း-လူသိများချိန်းတွေ့ဆိုက် ၂၄ နာရီအခမဲ့။ သင်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးတစ်ခုလုပ်ကြေးပေးသွင်းပေးဆောင်၊ပေးပို့၊သို့မဟုတ်လွှဲပြောင်းငွေမှာသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကုန်ကျစရိတ်။ သင်တွေ့ဆုံနိုင်ပါအခမဲ့နေ့တိုင်းပါဘဲ။ ပြီးတော့လည်းမေ့ထိုက်သောသင်ချိန်းတွေ့စတင်သင့်ဆိုဒ်မပါဘဲမှတ်ပုံတင်။ ခံစားသင့္ေတာ္ေသာကျွန်တော်တို့ရဲ့ချိန်းတွေ့န်ဆောင်မှု။ ဖတ်ရတောက်ပတဲ့စိတ်ခံစားမှုနှင့်ခံစားချက်တွေကိုထံမှတွေ့ကြုံတစ်ခုမမေ့နိုင်သောအစည်းအဝေးနှင့်အတူစိတ်ဝင်စားဖို့ဆွဲဆောင်မှုလူတွေကအခုအချိန်မှာအခမဲ့အဘို့နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲ။ ကျနော်တို့အဆက်မပြတ်လက်ခံရရှိ အပြုသဘောတုံ့ပြန်ချက်သုံးစွဲသူများထံမှအလုပ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးအသိအကျွမ်း၏။ တချိန်တည်းမှာ၊ကျွန်တော်တို့အဆက်မပြတ်လက်ခံရရှိအားလုံးအကြံပြုချက်များနှင့်အကြံပြုချက်များကိုစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်ကောင်းမွန်၏။ ကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်နားလည်လိမ့်မယ်လျှင်သင်စွန့်ခွာသင့်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ကဆိုက်ကိုအသုံးပြုလူမှုရေးခလုတ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော။ ဒီခွင့်ပြုမှသာအသိအမြင်၊ဒါပေမယ့်လည်းတိုးတက်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီမံကိန်း။ အခုအသုံးပြုလူမှုရေးခလုတ်နှင့်မှတ်ချက်များဆိုက်ချိန်။
ဆိုဒ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုလုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အတည်ပြုသင့်ဖုန်းနံပါတ်နှင့်စတင်ချိန်းတွေ့အသစ်အမျိုးသားများခွင့်ပြုချက်မပါဘဲကိုရ်နှင့်ချက်တင်အတွက်အခန်းပေါင်းစကားပြောခန်းနှင့်မည်သည့်ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲနှင့်ကန့်သတ်။ ငါလိုလူကိုခရီးဦးကြိုနှင့်သားအတွက်ကိုရ်နှင့်လုံးဝတာဝန်ခံအခမဲ့။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်မည်သည့်ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲဆက်သွယ်ရေးနှင့်စာပေးစာယူ၊အတုအကောင့်များနှင့်ကန့်သတ်။ လူတွေကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်၊သူတို့ကရှာတွေ့သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများနှင့်တွေ့ဆုံရန်နှင့်အထဲသို့မဝင်ရ။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုက်ပေါ်တွင်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။ အတည်ပြုသင့်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့စတင်ရှာဖွေနေသစ်ကိုရည်းစား၏မြို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုရ်နှင့်ဆွေးနွေးရန်အတွက်ချက်တင်နှင့်အသိုင်းမပါဘဲမည်သည့်ကန့်သတ်ခြင်းနှင့်ကန့်သတ်။
အာရှမိန်းကလေးတစ်။ ထိုသူအချို့တို့သည်အရှေ့ကြည့်၊သူမ်ားေတြကနေအသစ်သောအရာဆက်ဆံရေးနှင့်သူလိုစမ်းသပ်မှု၏အဖြစ်မှန်ကိုသုံးတာပါ။ အင်တာနက်အဆင့်မြင့်အင်္ဂါရပ်များ:လျှင်သင်တို့တွေ့ဆုံရန်လူတို့နှင့်အတူကလေးမလေးအပေါ်လမ္း၊ထို့နောက်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်အုပ်စုများအလိုက်အုပ်စုများအသိုင်းအဝိုင်းအတွက်လာကြလိမ့်မည်ကယ်ဆယ်ရေးမှ။ ဒါပေမယ့်အရေးကြီးတယ်င်၊ရှေ့ဆက်စဉ်းစားကြောင်းသင်ဘာလိုချင်ထွက်၏ဆက်ဆံရေးနှင့်အတူအာရှအမျိုးသမီးတော့မဆင်းရဲစိတ်ပျက်။ ေရိုးရှင်းတဲ့စကားပြောဆိုမှုတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုအပြစ်မဲ့တ၊ပရောပနှင့်အတူအနည်းငယ်မျှသာအသိပညာအလုံအလောက်။ ဘာသာစကားတစ်ခုသို့မဟုတ်အနည်းဆုံးအွန်လိုင်းဘာသာပြန်။ ဒါပေမယ့်အဆိုပါအင်္ဂါရပ်များအတွက်ဆက်ဆံရေးနှင့်အစဉ်အလာ။ နှင့်အမျိုးသမီးများတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်၊ဒါကြောင့်သင်ရွေးချယ်ဖို့အမှန်ဆက်သွယ်ရေးစတိုင်။ အရှာကြသည်လျှင်သင်အနာဂတ်အတွက်ဘဝလက်တွဲဖော်ရီးယားသို့မဟုတ်ဂျပန်နိုင်ငံ၊သိရန်အရေးကြီးတဲ့ကိုးရီးယားလူတစ်အနုတ်လက္ခဏာသဘောထားဦးတည်ရောနှောထိမ်းမြားခြင်းကြောင့်၊နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ငြင်းပယ်အကြောင်းပြချက်မရှိ။ အထူးသဖြင့်ခက်ခဲသောအခြေအနေနှင့်အတူဂျပန်အမျိုးသမီးအတူဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ရန်သူတို့ကိုဒီတော့လွယ်ကူသည်မဟုတ်။ အခြားအခြေအနေနှင့်အတူ မိန်းကလေးများသည်တရုတ်ထံမှ။ အများအပြားရှိပါတယ်ဘာသာအဘို့အရှာနေလက်ထပ်မှပြည်၊သူတို့ဖြစ်ကြသည်အဖြစ်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အလေးအနက်ဆက်ဆံရေးများကိုအမှန်တကယ်ရက်စွဲ။ ဤကိစ္စတွင်အတွက်၊ကျွန်တော်တို့အများကြီးမျှော်လင့်ထားရှာဖွေတွေ့ရှိ။ ရှယ်ယာပုံပြင်များနှင့်အတူအစည်းအဝေးအာရှအမျိုးသမီး၊အလိမ့်မည်ကြောင့်အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်နှိုင်းယှဉ်ဖို့ဤအတွေ့အကြုံ။ အတွေ့အကြုံအညီ၊သင်တန်း၊ခက်ခဲသည်လူယောက်ျားဆွဲဆောင်ဖို့အရှေ့တိုင်းအလှအပ၊ဒါပေမယ့်ဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူး။ တရာမတတ်နိုင်ကြောင်းပြောဆိုတဲ့အကြောင်းအမျိုးသမီးများ၊သို့သော်မည်သို့သင်မျှော်လင့်ဖြည့်ဆည်းဖို့တရုတ်အမျိုးသမီးအင်တာနက်ကျော်။ မှတ်ပုံတင်ရန်အဘို့ရှာကြသည်လျှင်တစ်ဦးအမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ပါ၊မိန်းကလေးများအပေါ်တစ်ဦးဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုက်ကနေတရုတ်နိုင်ငံနှင့်မွမွ်ေဝမည္၏။ လျှင်ဤသည်သူမ၏တုံ့ပြန်မှု၊သူမ၏ရေးသားခဲ့သည်ကြောင်းအလွန်ကောင်းတဲ့နှင့်သူမကသူမ၏တွေ့ဆုံရန်။ ထိုအခါအလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဒါဟာင့်။ ကျေးဇူးပြုအကြှနျုပျကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်၊ငါသည်ကဒီမှာဖြစ်ကြောင်းကိုအပေါင်းတို့သည်အချိန်။ အပြည့်အဝသို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကူးပစ္စည်း၏အတားမြစ်ပြီးမှကိုးကားရင်းမြစ်များအလိုအတည္ျပဳခ်က္ရယူ၏ရုပ်၏အသုံးပြုမှုကို။.
လူမှုအစည်းအဝေးနှင့်အတူအမျိုးသမီးတစ်ဦးဆန္ဒရှိသူသည်အများအတွက်တာဝန်ရှိမျှဝေမိသားစုဘဝနှင့်အဖြုန်းအချစ်တော်လေးထိုက်နှင့်နားလည်မှု။ တူရွည္၊အိုမိန်းကလေးပျော်ရွှင်သောအသက်တာနှင့်အတူကျွန်တော်ကတော့ငြီးငွေ့ဖြစ်ခြင်းတည်း၊ငါရန်မလိုအပ်ပါဘူး၊ငါအထူးတပ်ဗိုလ်မှူးကြီးသူအဆင္ေနားယူချိုးဖောက်များအတွက်ရန်သူရဲ့ဝိညာဉ် အေးဆေးတည်ငြိမ်ပါ။ ငါအသက်ရှင်သောအတွက်ကိုယ်ပိုင်။ အနောက်ဘက်လျစ်လျူရှုကြောင့်။ ငါကသူတို့ကိုငါ့အသက်ကိုအတွက်။ ခေါင်းဆောင်။ ကျွန်မမကြာခဏပြုံးရယ်ငါသည်ထွက်ရှာတွေ့ချင်၊၏ဟုတ်ပါတယ်၊ဒီအအလေးအနက်ထားဆက်ဆံရေးအတွက်တစ်မိသားစု။ ငါလိုမေတ္တာ၌လဲကျ။ အဓိကအရာကနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်စာနာနားလည်မှုအသီးအသီးအခြား၊ထိုအဓိကစံသတ်မှတ်ချက်အဘို့အပျော်ရွှင်မှု၏မိသားစုများ။ ငါရှာနေတာပါအဘို့အချိုသောသတ္တဝါအပေါင်းတို့ကို။ ချစ်စရာ၊ချစ်စရာ၊ဆွဲဆောင်မှု။ တစ်ဦးလိမ္မာပါးနပ်သောသတ္တဝါအပေါင်းတို့ကို၊သူဘဝ၌နှစ်ထပ်ဆုံးရှုံးမပါဘဲအဝိညာဉ်တော်နှင့်လိင်စိတ်များ၏။ ငါကြိုးစားမှအပြုသဘောကိုထိန်းသိမ်းရန်။ ရင်နိုင်ပါသည်၊ငါဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်တစ်ကျန်းမာတဲ့လူနေမှုပုံစံစတဲ့။ အခြေခံအားဖြင့်၊ငါသည်အဘယ်သို့ပြုချင်တယ်။ ငါနေချင်စဖွယ်။ ကိုယ်ထိလက်ရောက်မထိုက်မတန်။ တရားမျှတ။ ငါအသက်ရှင်သောအတွက်ဥယျာဉ်မြို့အနီး။ ဘဏ္ဍာရေးလုံခြုံရေး။ တစ်ခုတည်းသောအရာမဟုတ်ပါ၊ဥပမာအားဖြင့်၊ချစ်မှချစ်။ အမျိုးသမီးလတ်အသွင်အပြင်နှင့်စိတ်ပညာ။ အတော်လေးကျန်းမာနှင့်ကျန်းမာသောလူနေမှုပုံစံစတဲ့။ အပြုသဘောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးယုံကြည်သောသူ၌မေတ္တာနှင့်လွဲချော်။ ငါချင်အသက်ရှင်ရန်အတွက်ဥယျာဉ်၊သဘာဝနီးစပ်နှင့်အတူ၊သင့်ရဲ့ချစ်ရသူ။ ပုံမှန်လူကို၊ယုံကြည်မှု၊ အလုပ်ကြိုးစားခြင်း၊ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လေးစား၊အဆိုအမျိုးသားများတဲ့သဘော၊ဟာသကမကင်း။ ငါအရသန့်ရှင်းသောနေ့၏ထွက်ဇူလိုင်လရဲ့အသက်၊ဒါပေမယ့်အချိန်ပို၊လူတိုင်း၏ဒုက္ခအတွက်။ အရေးကြီးသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်သူတို့ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်ဆွဲလိုအပ်သည့်သုံးသပ်ချက်၊ခံစားရအဖြစ်ငယ်လေးတစ်လူတစ်ဦး၊ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုအလွယ်တကူအစုရှယ်ယာနှစ်မျိုးစလုံးနာကျင်မှုနှင့်ဝမ်းမြောက်နှင့်အညီ၊သင်တန်း၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်တစ်ခုသေးငယ်သည်။ ဤအတတ္ႏိုင္ဆံုးပံ၊ဒါပေမယ့်ငါနေဆဲယုံကြည်ပါတယ်။ နှင့်အစွမ်းသတ္တိကိုအတွက်တည်ရှိသည်ယုံကြည်ခြင်းငါရှာချင်တယ်မည်သူတစ်စုံတစ်ဦးကလက်မခံသကဲ့သို့ငါ့ကိုငါဖြုန်းဖို့ဟာရိုးရိုး၊နူးညံ့သိမ်မွေ့၊ပြုစုစောင့်ရှောက်နည်းငယ်သင့်ရဲ့အသက်တာ၏ကြွင်းသောအတူငါ့မုချခဲ့လွန်ခက်ခဲအတွက်အမျိုးအစားများ၏မေးခွန်းများကဲ့သို့သင်တို့တစ်ခုခုရေးသားနိုငျကွောငျးအခါကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှိမ့်ချလွန်းပါတယ်။ ငါအမြဲကြိုးစားအဘယ်သို့ငါချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်အောက်မေ့သတိရငါကဲ့သို့အရာတစ်ခုခုနှင့်အတူဝါယာကြိုး၊ငါဆွဲရန်ရှိလိမ့်မည်အကြောင်းပြချက်၊ယန္တရားသို့မဟုတ်အသေးစိတ်အချက်၊နှင့်အဘယ်သို့ဖြစ်ပျက်မည်ကိုပိုပြီးရှုပ်ထွေးကိရိယာ၊အပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည်ကြောင့်ဖြစ်ပျက်၊တခါတလေသွားရှိရာအမှတ်ကျနော်ဖမ်းတက်ငါသည်အိပ်၌အချို့သောစိတ်လှုပ်ရှားသည်အထိငါသည်ထွက်ရ တနေ့လုံးသို့မဟုတ်လုံးဝ ရှာခြင်းမရှိဘဲတစ်ဦးလူစိမ်းအကူအညီများအတွက်နေ့လယ်စာသို့မဟုတ်အခြားအမိန့်တော်၊သာတစ်ဦးအားကြီးသောငတ်မွတ်ခေါင်းပါးနိုင်တွန်း။ အဘယ်သို့ငါရှာနေတာပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုအစဉ်အမြဲ"ဖြောင့်"၊ဒါပေမယ့်သူတို့မလား၊သူအဘို့ရှာဖို့အခွင့်အကြောင်းပြောသူဖြစ်ဖို့နီးစပ်ဆန့်ကျင်-ရုဇ်မိန်းကလေး၊ဟုတ်ပါတယ်၊လွှတ်ခြင်းမရှိဘဲဖြစ်ပါတယ်ကြိုက်လားအရမ်းငါ့ကိုအဖို့အရေး၊မူးယစ်ဆေးမပါဘဲကြိုက်လား၊တစ်ခါတစ်ရံကြိုက်လားမမသောက်ရ၊ပင်အများပြည်သူရုံးပိတ်ရက်များ၊ဟုတ်ပါတယ်၊အခြားအချက်များ၊ကအရေးမပါဘူး၊အရာအားလုံးကိုဒဏ်ငွေဖြစ်လိမ့်မည်ကိုငါလျှင်အကြွင်းအသွင်အပြင်၊ဝါသနာ-အချုပ်၊သိုးမွှေးထိုးသို့မဟုတ်အခြားလက်မှုပညာ၊ကျွန်တော်မကြိုက်ကြဘူးခေတ်သစ်တေးဂီတနှင့်ခေတ်ဒရာမာ၊ကျွန်တော်သဘောမတူပါဘူးစောင့်ရှောက်သင့်ရဲ့ခွေးနှင့်ကြောင်၏။ငါရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး။ ဒါဟာပြောဖို့ခက်ခဲပြီးကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့အ။ ငါပြုချင်ကြပါဘူး။ ချီးမွမ်း။ လူတိုင်းဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမြင်။ အများဆုံးအစိတ်အပိုင်း၊စိတ်မခိုး၊ငါမသောက်ပါနှင့်၊ငါထုတ်လုပ်သူတစ်ဦး၊ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူး။ တစ်စုံတစ်ဦးကအမှန်တကယ်တန်ဖိုးထား။ ကြတာကိုကျွန်မပြောပြမယ်-သင်သာထွက်ရှာတွေ့သည့်အခါဆက်သွယ်သည့်သွင်၊ငါတစ်စုံတစ်ဦးကိုရှာဖွေချင်တယ် ချမ်းသာ၊ဥာဏ်နှင့်စောင့်ရှောက်။ တကယ့်။ စမတ်မိန်းကလေးတစ်ဦး။ မထင်မိပါဘူးစုပ်ယူခက်ခဲသည်မိန်းကလေးတစ်ဦးရဲ့သီလ။ မင်္ဂလာပါ။ သင်ကအပေါ်တစ်ဦးချိန်းတွေ့စာမျက်နှာနှင့်အတူအမျိုးသားများအတွက်ဧရိယာ။ ဒီနေရာမှာသင်တွေ့ဆုံနိုင်ပါတစ်ခုတည်းယောက်ျားအဘို့မြို့သူမြို့သားမပါဘဲအခမဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊သင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်ပရိုဖိုင်းအပေါ်။ ထိုအခါသင်ရလိမ့်မည်၏စံချိန်တင်မိနစ်အနည်းငယ်အဆက်သွယ်ရေးနှင့်အတူအမျိုးသားများနှင့်လူများနှင့်အတူနေထိုင်သောအခြားမြို့။ နှင့်တွေ့ဆုံရန်၊သင်၏မေတ္တာကိုတွေ့ရှာတွေ့၊သင့်ရဲ့စာန်၊မင်္ဂလာဆောင်သို့မဟုတ်မင်္ဂလာဆောင်။.
ဆန္ဒရှာဖွေရန်တစ်ဦးကိုခစျြတစျခု-မိတ်ဆွေတစ်ဦးသို့မဟုတ်ချစ်ရသူတစ်ဦး-သည်အတော်လေးသဘာဝ။ ဒါဟာကောင်းတဲ့ရှိသည်ဖို့သင်ချစ်သောသူတစ်စုံတစ်ယောက်အတွက်တူညီသောရုပ်ရှင်နှင့်စာအုပ်များ၊နှင်းလျှောစီးသွားနှင့်ကြယ်ပေးသင်ပူလက်ဖက်ရည်အခါလူတုပ္ေကြး၊အပူသင့်ရဲ့ရှုံးနိမ့်ပြီးသင့်ရဲ့အောင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလော့။ မလာကြလျှင်သူတို့တွေ့သေးပါ၊ဒါပေမဲ့အတက်လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ဆိုက်၊မပိုယူသင့်ထက်ငါးမိနစ်။ ပြီးနောက်အခမဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊သင်ရနိုင်သမျှဝန်ဆောင်မှုများ၏ဆိုက်နှင့်သင်တွေ့ဆုံရန်အတွက်မိန်းကလေး သငျသညျအစဉ်အမြဲအိပ်မက်မက်၏။
အစည်းအဝေးအမျိုးသားများအတွက်အကျိုဧရိယာကိုကနေတဆင့်အင်တာနက်ကိုအတူ၊များစွာသောအခြားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ၊ကားအမ်ိဳးအစိတ်အပိုင်းကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာ။ သငျသညျကွားနိုငျအများအပြားပုံပြင်များအပေါ်အင်တာနက်ကိုဘယ်လိုအကြောင်းအစည်းအဝေးကူညီသင်ရှာတွေ့နှင့်သင့်ဘဝ၊သင့်မိတ်ဆွေတစ်ဦး။ ဒီအဖြစ်ဖန်တီးတစ်ဦးအားကြီးသောမိသားစု၊ဒါပေမယ့်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောပေါ်လာခြင်း။ စာရင်းဇယားအရသိရသည်၊အရေအတွက်၏ကွာရှင်းပြီးယခုနှစ်အတွင်းအဆုံးသတ်၊နှင့်အထိမ္းအမွတ္ကြာကြာကြာရှည်ခံသည်။ ပြဿနာကဘာလဲမိတ်ဖက်အခွင့်အလမ်းများမှာအရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍ။ ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များဇၨနာက်မ္း သင့်ရဲ့ဧရိယာထဲမှာကူညီလိမ့်မည်သင်သည်အတွေ့အသက်ကိုယ်အဘို့အက၊ဆက်ဆံရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လိမ့်မည်အများဆုံးအပြုသဘောဆောင်တဲ့နည်းလမ်း။ လမ်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ပေါ်တွင်နှင့်ငါတွေ့ပြီအဂလိုက်ဖက်သီးအသီးအဘို့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အလေးအနက်အစည်းအဝေးများ၏ဆက်ဆံရေးအတွက်အကျိုဒေသသစ်တစ်ခုအဆင့်၊နှင့်အပေါင်းတို့သည်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ဆိုက်၏အခမဲ့။ အကြားတစ်ဦးလူနှင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးထိုသို့အားဖြင့်တည်စေခြင်းငှါမဖြစ်နိုင်တော့ခဲယဉ်းရှာဖွေဖို့အမိန့်တော်ရှိပါတယ်။ အကြားလူနှင့်အမျိုးသမီးတွေဟာရှုပ်ထွေးဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကိုတည်ထောင်တာ။ င်းတို့၏။ အသီးအသီးအကျွမ်းထူးခြားသည်၊အခြေအနေအသီးအသီးထူးခြားသည်။ ဒီနေရာမှာ၊သင်တန်း၏၊သငျသညျနိုင်ရေးအကြှနျုပျကိုပြောပြပါနဲ့ကျွန်တော်ကိုပြုလိမ့်မည်၊ဒါပေမဲ့ဒီတစ်လှည့်ကွက်သည်။ အတွေ့အကြုံလိုအပ်သည်အောင်မြင်သောချိန်းတွေ့နှင့်သာကူညီပေးနိုင်သည်။ ဤနည်းဥပဒေသည်အဘယ်ကြောင့်စုစည်းလက်တွေ့ကျတဲ့အတွေ့အကြုံရှိမဖြစ်အတွက်မည်သည့်အခြေအနေ။ မရှိ၊ဘာမှမလှပသောသို့မဟုတ်ထင္တယ္။ ချိန်းတွေ့ဆိုက်။ အဘယ်သူမျှမကောင်းသောသို့မဟုတ်ဆိုးဗျာကုတ်ခြစ်ရာမှ။ ခပ်သိမ်းသောမိန်းကလေးတစ်ဦးတစ်ဦးအလယ်နှင့်တစ်ခုခုနှင့်ကိုက်၊ဒါကြောင့်အပေါ်မူတည်သင့်စိတ်ဓါတ်များနှင့်မျှဝေခံစား။ အဘယ်သို့ဖြစ်ပျက်မည်သူ့ကိုမှယနေ့အသင့်လျော်မဖြစ်၊မနက်ဖြန်။ ပင်ဒီအတွက်ကြောင့်၊တစ်ဦးအလုပ်ကြိုးစားချဉ်းကပ်မှု၊အောင်မြင်မှုရက်စွဲများ၏အာမခံချက်မပေး။ ဒီကိုဆိုလိုသည်သင်ဆုံးရှုံးရလိမ့်မည်အ လျှပ်စစ်။ တစ်ခုခုအလုပ်မလုပ်ပါဘူး၊မရဘူး။ ဤသည်၏အနုပညာအဆင်ပြေ။ သင်စတင်သင့်များနှင့်အတူဆက်သွယ်ခြင်းအကြောင်းရင်းတစ်ခုအရေ၊နှင့်ပှငျ့ပှ။ ဤကိစ္စတွင်အတွက်မိန်းကလေးမတွေ့အောင်နှင့်အတူသူ့ကိုသို့မဟုတ်မေးမြန်း။ စတိုးဆိုင်အတွက်တောင်းခံနိုင်သည်ဟုဆိုထားသည်သောသင်အရမ်းမကောင်း၊အနိုင်မပြီးနိုင်မမြင်နိုင်လ်အမှတ်အသားအပေါ်ထုတ်ကုန်:ကူညီပါခင္ဗ်ာဒီစာကိုဖတ်သလဲ.
ဒါကြောင့်လည်းမောင်းအမျိုးသမီးတစ်ဦး၏နားစရာအချက်တစ်ခုအမျိုးသားများအတွက်။ သင်ပြောနိုင်ပါတယ်သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်သောသင့်လျော်သောအိမ်၊လမ်းပေါ်မှာ။ ပြီးနောက်ပထမဦးဆုံးတောင်းဆိုမှု၊ဒါမှမဟုတ်အဆိုပါမေးခွန်းဖြစ်ပါသည်ရှိမရှိဖြစ်ပါသည်။ ဤအထောက်အထားများ၊တော်လှန်ရေးလူမှုရေးစိတ်ပညာသည်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့၊အဖြစ်လိုသူတစ်ဦးရှင်းပြ.
အမည်၏နောက်ရပ်တန့်။ ဟုတ်ကဲ့။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာကတည်းကဒီနေရာမှာပါတယ်။ သူသည်အသေခံခဲ့။ ဒေသခံနိုင်ငံသားများမှာ။ အမျိုးသမီးသတင်းအချက်သောသူ၊ဤသူတို့နှစ်။ သူတို့ကအံ့သြစရာ။ ဒါကြောင့်မမျှော်လင့်တဲ့မိန်းကလေးကိုပေးသင်သူမ၏ဖုန္းနံပါတ္။ သင်ကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့အကြောင်း။ လူအနည်းငယ်အဘို့နှင့်အချို့သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကတ်များကိုသူတို့ပင်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ပြသ အခါမှသူတို့ပထမဦးဆုံးတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ နှင့်ငါတို့ရှိသမျှသည်ဖတ်ဒီထဲကသိချင်စိတ်။ အတိုချုပ်ထဲမှာ၊အခမဲ့ခံစားရဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကြောင်းပြောဆို၊ကိုယ့်အထောက်အကူ။ သင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်သူသည်သင်တို့ကိုချစ်မည်၊အခေါ်သို့မဟုတ်စာသား။ ထိုအလျှင်မ၊ထိုအခါသင်သည်အဘယ်သူမျှမအာမခံချက်။ ဒါဟာမိုက်မဲလိုက်ရန်တစ်စုံတစ်ဦးသို့မဟုတ်တစ်ခုခုသက်သေပြ။ မကြိုက်ဘူး။ ကောင်းပြီ၊ကုန်အံ့ရဲ့ရှာတွေ့။ မိန်းကလေးများမရှိသလောက်စတင်ထွက်မသွားဘဲ။ မိန်းကလေး၊ကဗျာနှင့်အထက်တွင်ရီ။ တကယ်တော့၊လူအပေါင်းတို့သည်အထူးအမှုအရာ:လက်ထပ်ထိမ်းမြား၊ပိုက်ဆံ၊၊ကလေးတွေပျော်စရာ။ သူမြင်သောပန်းတိုင်ဖြစ်မယ်လို့တဆင့်သဘောပေါက်။ ဒါကြောင့်၊သင်ပြောသင့်သောငါ၏အောင်မြင်မှုအတွက်လူ့အဖွဲ့အစည်း။ သိသေချာအောင်လူအများကြီး။ လူအဆင်သင်။ သင်အလုပ်မှာကလူတွေအားလုံးကိုလိုအပ်။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲကြသောအခါတစ်ဦးပုံပြင်၊ဥပမာအားဖြင့်၊သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တုိက္ခန္းအိမ္၊ကားပါ။။ ဘယ်လိုသာမန်ခဲ့သည်၊ဒါပေမယ့်ချက်ချင်းအတိုးအမြတ်။ မိန်းကလေးတစ်ဦးအဘို့အ၊ဒါကြောင့်အရေးကြီးတဲ့လူသိမှရရန်သူ့ကိုလေသည်။ ဒါကြောင့်၊သင့်အနေအထားအစဉ်အမြဲရှင်းလင်းပြတ်၊ဒါကြောင့်ဖြစ်ပျက်သကဲ့သို့များသောအားဖြင့်အဘယ်သူမျှမမြင်၊ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှအာရုံစိုက် အာရုံစိုက်မ်က္လံုး၊အသံ။ လူသက်သေပြလိမ့်မည်ဟု၊ဘုရားသခင့၊သင်တို့သဘောတူ။ ရပ်တန့်ဘို့၊ပြီးတော့သင့်ရဲ့အောင်မြင်လိမ့်မည်ဟုအာမခံချက်။ ပျော်စရာရှိသည်။ ရက်စွဲများအပေါ်။.
Fideo sgwrsio dim cofrestru
အသက်ရှင်သောစမ်းချောင်းမိန်းကလေးများ သိမှရ ၄၅ ချက်တင်ကစားတဲ့အြန္လိုင္း ၁၀၀၀ ဝက်ဘ်ဆိုက်ဗီဒီယိုအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးလိုတွေ့ဆုံ ချိန်းတွေ့ချက်တင် ဗီဒီယိုချက်တင်အခန်းပေါင်းချိန်းတွေ့မိန်းကလေးများအခမဲ့အွန်လိုင်း သင့်ဖုန်းမှအခမဲ့ မပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၁၈ ဗီဒီယိုချက်တင်အခမဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်း